Khabar Break - मेरो सपनाको समृद्धि अनि अँध्यारो वर्तमान
Monday 23rd of October 2017, 7:01:19 pm
विचार Published On: Wednesday 21st of December 2016, 07:21 AM
“नयाँ नेपाल” २०६२-६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात सर्वाधिक प्रयोगमा आएको शब्द हो । अचेल यो शब्द त्यति सुनिदैंन। यसको स्थान “समृद्धि” ले लिन थालेको छ । दिनहुँका भाषणहरुमा समृद्धि प्रस्फुटन हुन्छ । चोक, चौतारा, तिन तारे, पाँच तारे सबैतिर यसैको चिन्ता देखिन्छ तर समय भने ठिक उल्टो चलिरहेछ । यो उल्टो हिँडाईले कसरी सुल्टो परिणाम ल्याँउछ हेर्न बाँकी नै छ । जेहोस् संकेत भने देखिन थालेका छन् । सकसपूर्ण छ वर्तमान, अत्यास लाग्दो अनि पट्यारलाग्दो छ । आशाको दियो निभ्दै छ बिस्तारै बिस्तारै र पनि जीवन त धान्नु नै छ । मर्न सकिदैंन, त्यसैले बाँच्नुपर्छ । बाँच्नका लागि केहि गर्नुपर्छ । यसैले त एकएक गरी हजारौं युवा मनभरी सप्तरङगी सपना सजाउँदै विदेश भासिदै छन् । युवाको खडेरीमा गाँउ नै किन रित्तो नहोस्, राजनीतिक फसल फस्टाएकै छ । अनि चलेकै छन् समृद्धिका रोमाञ्चक बहसहरु । कोहिकोहि हत्तपत्त टिप्पणी गर्छन्, के नै भएको छ र १ सबै ठिकठाकै छ । बेकारको चिन्ता । घर, स्कुल, विद्यालय, जागिर चलिरहेकै छ । बाटोघाटोमा गाडि गुडिरहेकै छन् । मर्नी मरिरहेकै छन्, बाँच्ने बाँचिरहेकै छन् । आफ्नो गुजारा चलिरहेछ । हो त, सबै ठिकठाकै चलिरहेछ । एउटा भनाई नै छ, निन्द्रामा रहेकालाई बिउँझाउन सजिलो छ । निन्द्रामा रहेको स्वाङ पार्नेलाई सकिदैंन । यिनिहरुलाई सामान्य पानी छम्केर हुँदैन, सिस्नु नै लगाउनुपर्छ ।
अचेल देश दुख्न थालेको छ । नदुखोस् पनि कसरी देशलाई क्षतविक्षत बनाउन कसम खाएर लागेका छन् रावणहरु निशाना लगाउँदैछन् मुटुमा, कहिले शिरमा, कहिले पाउमा, कहिले दायाँतिर, कहिले बायाँतिर । त्यसैले विद्रोहको ज्वारभाटा उम्लिरहेको छ, कँिँन्सरी तातेर आँउछ जब रिवाईन्ड हुन्छन् केहि शब्दहरु । “मन्दिरको भेटिले चल्दैन प्रदेश”, “पहाडबाट नअलग्याई हुँदैन मधेष” यो विरोधाभाषले निदाउन दिदैंन । नशामा रगत होईन, विद्रोह बग्न थाल्छ तर विवश छौं । विद्रोहको नाममा खेल्नु छैन मर्ने–मार्ने खेल, पड्काउनुछैन बन्दुक कसैको विरुद्ध, न भत्काउनु छ पुलपुलेसो, बाटोघाटो । सहिदको नाममा ब्यापार गर्नुछैन न त विदेशी दानापानीको आडमा उपद्रो मच्चाउनुछ । सक्दैनौं हामी दशगजा पारीबाट आफनै दाजुभाईलाई ढुङगा बर्साउन, नाकाबन्दी गर्न । त्यसैले विवश छौं तर यो विवशता नै सहि, विद्रोहको आवाज बुलन्द गर्दैछौं । विश्वास छ आँफैमा, भिमसेन थापाको विरासत जोगाउने छौं । जोगाउने छौं देश, बनाउने छौं देश तर निदाएको स्वाङ पार्नेलाई बिउँझाउनुछ । सक्ताका लागि देशको मोल मलाई गर्नेहरुभन्दा बसपार्कका बेश्याहरु सम्मानित लाग्छ । कम्तिमा उनीहरुले देशप्रति बेईमानी गरेका हुँदैनन् । निमुखा जनताको रगतले कट्कट्टिएको कोट लगाएर सिंहदरबार छिरेका लेण्डुपहरुको समृद्धिको गफ घर जलाएपछि खरानीको कमी नभएजस्तै हो । देशलाई लिलामीमा राखेर समृद्धि प्राप्त गर्नुछैन् । नालापानीको युद्धमा भोकतिर्खा र पानी बिना पनि लडेका पुस्ताको सन्तती हौं । हामै्र पौरखमा स्वाभिमानका साथ समृद्धिको फसल भित्राउने छौं । झुकेर, चुकेर, हिनतामा होईन, शिर ठाडो पारेर बाँच्नेछौँ ।
कहिलेकाँही विरक्त लाग्छ, घर जलाएर खरानीको ब्यापार गर्न चाहाने आधुनिक कालिदासहरुको कमी छैन् । प्रधानमन्त्रीको अवस्था घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भनेजस्तै छ । माओवाद, प्रचण्डपथ, गौतम बुद्ध, जंगबहादुर भन्दाभन्दै लेण्डुप पथमा आईपुगेको पत्तै छैन्, तर चिन्ता उनको होईन्, उनको पार्टिको होईन, उनको कुबुद्धीले देशले दुर्दशाा भोग्नुपर्ने भो, चिन्ता यहाँनेर हो । उनी रहुन् वा नरहुन्, देश नै रहँदै कि भन्ने चिन्ता हो । खलाँसीले देश चलाउदाँ दुर्घटना हुन्छकि भन्ने चिन्ता हो, यो अस्वभाविक देखिदैंन् । हामीले बुझेको लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरी हुन्छन् तर जनादेशबिना रञ्जीत रेहरुको इसारामा देशको साँध सिमाना मिलाउने कोशिसले यो सरकार राष्ट्रहितको पक्षमा छैन्, भन्ने प्रष्ट्र भएको छ । सिमानामा एस.एस.बिको बुट खाएर यातना प्रताडना सहेर देशको सिमा जोगाएका मधेषी दाजुभाई दिदी बहिनीहरुलाई अल्पमतमा पार्ने गरी आएको खुकुलो नागरिकताको प्रावधानले कसरी पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गर्छ ? पहाड र तराईलाई अलग बनाउँदा कसरी मधेषको प्रगति हुन्छ ? भारतबाट पाकिस्तान अनि पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएको ईतिहास अनि देशभित्र चल्दै गरेको बहुराष्ट्रियताको बहसले झस्काउँछ अनि प्रश्न गर्न मन लाग्छ के यसैको लागि हो लोकतन्त्र ? गणतन्त्र ? होईन । हामी चाहान्थ्यौं, लोकतन्त्रको फराकिलो राजमार्ग अब समृद्धिको यात्रातय हुनेछ । गणतन्त्रको छहारीमा जनताको निर्णायकत्वलाई स्थापित गर्दै नेपाली स्वाभिमानलाई उठाउनेछौं । “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” हाम्रो पहिचान हुनेछ । हामीले देखेको सपनामा यस्तो हुनेछ देश, जहाँ न्याय नपाएर कोहि गंगामायाहरु छट्पटाउनुपर्ने छैन, दाईजोको नाममा कोहि पनि चेलिबेटी कुटिनुपर्ने छैन, बोक्सीको नाममा कोहि पनि दिदी बहिनी जल्नुपर्ने छैन्, गरिबी र अभावले पिल्सिएर कोहि पनि बालबालिका सडकमा आउनुपर्ने छैन्, सिटामोल नपाएर, चामल नपाएर कोहि भोकभोकै मर्नु पर्ने छैन्, कोहि पनि युवा सर्टिफिकेट दराजमा थन्काएर विदेश जाने लाममा लाग्नुपर्नेछैन्, क्रान्तिका नाममा मर्नेछैनन् फेरि कोहि काजोल खातुनहरु, घाँटी रेटिनेछैन मुक्तिनाथ अधिकारीहरुको, भ्रष्टचार र कुशासनलाई फालिनेछ जरैदेखी उखलेर, हरेकले पाउनेछन् योग्यता अनुसारको काम अनि काम अनुसारको दाम । न्यायलयको खिल्ली उडाईनेछैन्, भ्रष्टाचारीहरुलाई माला पहि¥याईने छैन् । जनतालाई समस्या पर्दा आडैमा हुनेछ सरकार, समृद्ध देशको रुपमा विश्व रंगमञ्चमा सगरमाथा झँै शिर ठाडो पारेर प्रस्तुत हुनेछौं हामी । यो लोकतन्त्र यसैका लागि ल्याएका थियौं । यो गणतन्त्रका लागि यसैले लडेका थियौं तर विडम्बना समय ठिक उल्टो चलिरहेछ । युवालाई विदेश निर्यात गरेर अडिएको देश, सिटामोल नपाएर मर्न विवश जनताहरु, स्कुलको आँगनसम्म पुग्न नसकेका बालबालिकाहरु, न्यायका लागि छट्पटाईरहेका गंगामायाहरु, बलात्कृत सुन्तली धामीहरु, दाईजोका नाममा जिँउदैं जल्न विवश दिदी बहिनीहरु, बोक्सीको नाममा प्रताडना सहन विवश असहायहरु अनि बाटोघाटो बिजुली बहसको विषय बन्दैनन् । संक्रमणकालको रटान लगाउँदै निर्वाह चलाउदैंछ राजनीति, र हामी नमूना प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेछौं वर्षोदेखि जहाँ समयमा कुनै पनि तहको निर्वाचन हुँदैन् । जहाँ दुई चार शीर्षस्थहरु जे गर्छन त्यही नै देशको निर्णय हुन्छ, जनताको निर्णय कहलिन्छ । सम्प्रभु संसद उनीहरुको निर्णय खुरुखुरु सदर गर्छ । एउटा लोकमान सिंह सिंहदरबार थर्काउँछ, मधेषी जनताको अधिकारको आवरणमा खुल्लमखुल्ला अंगिकृतलाई प्रमुख पदमा पु¥याउन, अनि एउटा देशलाई बहुराष्ट्रमा विभाजन गर्न मरिमेटेर लाग्छन् मधेषी दलहरु । विदेशी दानापानी खाएर स्वदेश ढुङ्गा हान्नेहरुलाई वार्ताका लागि रेड कार्पेट विच्छयाउँछ सरकार । कठै देश हाम्रो, कठै लोकतन्त्र हाम्रो, आफ्नै मातृभूमिको विरुद्ध विष बमन गर्ने सिके राउतहरुलाई छोडिदिन्छ अदालत । यहाँ देश नै टुक्राउने अभिब्यक्ति दिन छुट छ । विदेशी राष्ट्रप्रमुखको सवारीमा सार्वजनिक बिदा गरिन्छ् । आफ्नै राष्ट्रप्रमुखको तिर्थयात्रा ( जनकपुर प्रकरण ) मा सुनपानी छर्किईन्छ । छिमेकीलाई खुशी बनाउन संविधान संशोधन हुन्छ, जनतालाई खुशी बनाउन जनमतको कदर हुँदैन् किनकी यो देशको लोकतन्त्रमा जनताले सरकार बनाउदैंन्, छिमेकीले बनाउँछ । छिमेकीले लडाउँछ । त्यसैले त राजनीतिक वेश्याहरु आफ्नो कुर्सीको आयु लम्ब्याउन देशका बैरी सामु बलत्कारको खुल्ला आह्वान गरिरहेछन् । यिनीहरुलाई लोकको लाज छैन् । यिनीहरु रोम जलिरहँदा बाँसुरी बजाउने निरोभन्दा कम छैनन् ।
केहि समयअघि अलिकति आशा जागेको थियो । “भुगोल सानोठुलो होला, सार्वभौमिकता हुँदैन्” यो हुङ्कारले छाती फुलेको थियो । पानी जहाज, रेल, खानी उत्खनन्, घरघरमा ग्याँस, लोडसेडिङ्को अन्त्यजस्ता अपत्यारिला तर सम्भव योजनाहरुले किनकिन चङ्गा भएको थियो मन, र फुरुङ्ग हुँदै उडेको थियो । दुर्भाग्य कथालाई यसरी टुईस्ट गरीयोे, जसरी हामीले सोचेकै थिएनौं । त्यससँगै देखिन थाले बिरलै देखिने दृश्यहरु । क्लाइमेक्स सिनको बिरुपता सम्झन लायक छ, खलनायकको विजय र हिरोको पराजय, दिल्लीमा खुशीयाली र हर्ष बढार्इँ । अब निश्चित छ अर्को कथा झनै भयावह हुनेछ तर पर्दा पछाडिको निर्देशक अगाडि आउँदै गर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ त्यसको क्लाईमेक्समा हुनेछ, यो देशको पतन् । त्यसैले विद्राहको राँको बोकेर निस्किएका छन् हजारौं युवाहरु, जलाउँदैछन् संशोधन प्रस्तावको नाममा आएको पटकथालाई र प्रश्न गरिरहेका छन् के यसैका लागि मरेका थिए हजारौं सहिदहरु ? यसैका लागि थियो क्रान्ति, आन्दोलन ? कठोर अतितलाई बिर्सेर हामीले स्वाभिमान खोजेका थियौं, समृद्धि खोजेका थियौं, ब्यवस्थासँगै अवस्थामा परिवर्तन खोजेका थियौं तर ब्यवस्था परिवर्तन भयो, मानसिकता भएन् । पात्र बदलिए होलान् प्रवृति बदलिएन । समय बदलियो होला, संस्कृति र प्रवृति बदलिएन । अनि कसरी बदलियोस् देश ? देश बदलिएन । बदलिदैंन । अब त अगाडि बढ्ने कि पछाडि फर्किने होईन विषय देश नै रहँदैकि भन्ने चिन्ता हो । त्यसैले भो, चाहिएन अब नयाँ नेपाल, हामीलाई सग्लो नेपाल भए हुन्छ । हामीलाई अग्लो स्वाभिमानी नेपाल भए हुन्छ । मुर्झाएका सपना बिउँझिसकेका थिए । फेरि समयले जबर्जस्त बिषयान्तर गरेको छ र हामी उही राष्ट्रियताको कोर्समा फर्किएका छौं । “नेशन फस्ट” यो देशको एउटा युवा प्रश्न गर्न चाहान्छ, मञ्जुर छ ? यसका लागि तयार छौँ । यसमा सहमति हुन सक्दैन भने हेक्का रहोस् यो प्रतिनिधि आवाज हो । “जननी जन्म भूमिस्च, स्वर्गा दपी गरियसी” हाम्रो देश हामीलाई स्वर्गभन्दा पनि प्यारो छ । राष्ट्रियताका लागि भोकै मर्न तयार छौं तर झुक्दैनौं । देशलाई जोगाएरै छाड्छौं । प्रिय पाठकहरु, यसरी यहाँसम्म आईपुग्दा मेरो समृद्धिको सपना ओझेल परेको छ र अँध्यारो वर्तमानले म निस्सासिइरहेको छु तर मभित्रको अठोट मरेको छैन् । म अर्थात युवा, यो देशको युवा ।
सदस्य, अनेरास्ववियु, केन्द्रीय कमिटि
Cell no : 9855031455/9845164455